सँधैं झैं त्यो बिहान पनि एउटा नियमित बिहान थियो । उसैगरी घाम झलमल्ल लागेको थियो । पश्चिमतिरबाट मन्द तर बाफिलो समुद्री हावा चलिरहेको थियो । बाह्रै महिना एकै मौसम रहने हवाईमा हरेक दिन नै बोटवृक्षहरु एकैतमाशले हरियापरिया भएर हाँसिरहेका हुन्छन् । फूलबुट्यानहरु सँधै उसैगरि खिल्खिलाईरहेका हुन्छन् । चराचुरुङ्गीहरु सँधै आफ्नै आफ्नै लयमा मग्नमस्त चिर्बिर गाईरहेका हुन्छन् । अन्यत्र विविध परिवर्तित मौसममा रमाएर आउनेहरुलाई सुरुसुरुमा हवाई मनोरम र उत्तम स्थल लागेपनि रहँदै बस्दै जाँदा यहाँको एकतमासको वातावरण कटु हुँदै जानेरहेछ । कदाचित् म यस्तै महसुस गर्न थालिसकेको थिएँ ।<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
स्फूर्तिविहिन मैले गाडी स्टार्ट गरें । पार्किङ्ग लटबाट निस्कँदा स-सानो सभाकै निमित्त भेला भएझैं पार्किङ्ग लटभरि जम्मा भएका केहि बथान ढुकुरहरु केहि उडेर तितरबितर भए केहि हिँडेरै छेउ लागे ।
मावि टापूको पूर्वी खण्डमा पर्ने हाना रोड प्रविष्ट भैसकेका थियौं हामी । अनन्त फैलिएको प्रशान्त महासागरलाई देब्रे पारेर भीमकाय पहाडको पेटैपेट हिँडेको हाना रोडमा ड्राइभ गर्नु मात्रै पनि यात्राको भरपूर आनन्द उठाउनु सिद्ध हुन्थ्यो । एकै थेग्लो बादल समेत नभएको सफा नीलो आकाश, उस्तै गहीरो नीलो समुद्र, हरियालीले भरिपूर्ण पहाड र घना जंगलको संगतमा पुग्दा मलाई संसारमा कतै छल, कपट, ईर्ष्या, ईवि भन्नै कुरा नै छैन झैं अपूर्व मंगलको अनुभुति हुँदैथियो । धेरै घुमाउरा घुम्तिहरु र एउटा मात्र गाडी छिर्न सक्ने थुप्रै साँघुरा पूलहरु पार गर्दै हामी सम्भव भएसम्म दृश्यावलोकनको निम्ति उपयुक्त तय गरिएर सडक छेउमा चिन्ह राखिएका हरेक स्थलमा रोकिंदै अघि बढ्दै गयौं ।
नयाँ स्फूर्ति प्राप्त गरिसकेको शरिरले प्रकृतिको मनोरम छटासँग खेल्दै हामी वाईलुवा फल्स पुगेका थियौं । खास केहि थिएन वाईलुवा फल्स । सडक भन्दा केहि भित्र निक्कै अग्लो डाँडाबाट झरेको पातलो झरना र फेदमा सानो तलाउ । नेपालमा भएको भए यसको नाउँ पक्का पात्ले छाँगो हुन्थ्यो होला । यस्तै विचार आयो मनमा त्यहाँ पुग्दा । तर अरु ठाउँहरु भन्दा निक्कै धेरै मानिसहरु थिए त्यहाँ । झरनासँग तस्वीर खिचाईरहेका धेरै हँसिला मान्छेहरुको समुहमा हामी पनि उसैगरि सामेल थियौं । तस्वीर खिचाउने र आँखाले झरनाको सुन्दरता पिउने कर्म सकेर गाडीतर्फ फर्किने क्रममा हामी हिँडिरहेको गोरेटोको पारीपट्टी भएको आकर्षक गलैंचा बिच्छ्याईएझैं पाखोले मेरो ध्यान खिच्यो । आउने जानेलाई बाटो छोडिने हिसाबले गोरेटोमा छेउ लाग्दै उभिएर मैले भनें, 'हेरत उ त्यो पारी, गलैंचा ओच्छ्याएजस्तै कति राम्रो पाखो रहेछ । जाउँ है त्यतातिर । मलाई त्यो झार चिनेजस्तै लाग्यो ।'
त्यो हरियो पाखोले मलाई यस्तरी आकर्षित गरिरहेको थियो कि मानौ त्यो पाखो ठुलो चुम्बक हो र म सानो टुक्रा फलाम । साँच्चै नै पनि प्रकृति मेरोलागी चुम्बक हो र म प्रकृतिकोलागी चुम्बकिय धातु ।
त्यसताका साँच्चै पनि हाम्रो गौरादह क्षेत्रमा कसैलाई सर्पले डस्यो भने उपचारको निमित्त चारआली पुर्याउनु पर्थ्यो । हामीले थुप्रै पटक रातबिरात सर्पले डसेको विरामीलाई उपचारको निम्ती चारआली लगिएको, कति बचेर फर्केको त कति पुर्याउन नपाई शरिरमा विष फैलेर मरेको देखेसुनेका थियौं । त्यसैको प्रभाव हुनसक्छ हामीले त्यसदिनको खेल पनि त्यसै अनुरुप खेल्ने नीधो गरेका थियौं ।
गँगा र मैले हाम्रो अस्पतालमा आवश्यक कुराहरु जुटाउँदा जुटाउँदै अर्कोपट्टी खेल्ने साथीहरु मध्ये केसुले कराएर सोध्यो, 'ओई दीपक, तिमर्को रेडी भयो? हामी आउने है अब बिमारी ले'र ।'
चारआलीका डाक्टर र नर्स बनेर खेले पनि उपचार गर्दा भने गाउँ गाउँमा सपेराले सर्पको विष झार्ने जडीऔषधी भन्दै डुलाउँदै बेच्ने झारमौरोको काईदालाई अपनाएका थियौं । हुनपनि हामीले त्यसबेला चारआलीमा सर्पले डसेको विरामी लगेको थाहा पाएका थियौं तर त्यहाँ डाक्टरहरुले कस्तो विधीले उपचार गर्छन् भन्ने त हामीलाई थाहा थिएन ।
मेरो आदेश पालन गर्दै गँगा फाल तोडेर दौडिन् । सर्पको दबाई भनिएको चरिअमिलो लिन हामीले खेल्दै गरेको स्थानबाट केहि पर धान खेतको डीलसम्म जानुपर्थ्यो । त्यहाँ निक्कै झाडी र डीलैमा यौटा पाडारीको रुख थियो ।
'ए, तँलाई सीरुको टुसाले घोचेछ । पर्खी, पैले यो बिमारी जाती पारेर तेरो पनि दबाई गर्छु म ।' गँगालाई पर्खन लगाएर मैले ज्ञानेको सर्पले टोकेको नक्कली घाउमा चरिअमिलो राखेँ र अँगारको झारमौरो पनि राखें र भनेँ, 'अब पाँच मिनेटमै सर्पको बिख झर्छ र जाती हुन्छ ।'
गँगाले फेरि पानी मागिन् । हामीसँग त्यहाँ अरु पिउन मिल्ने पानी थिएन त्यसैले मैले ज्ञानेलाई अघिकै बोतल दिएर अह्राएँ, 'जा यस्मा पानी लिएर आइज ।'
पानी लिन गएको ज्ञानेसँग हस्याङ्ग फस्याङ्ग गर्दै उसको ठुल्दाजु पनि आउनुभयो । ज्ञानेले गँगाको बारेमा सबै बताईसकेको रहेछ उसको ठुल्दाजुलाई । गँगालाई देख्ने बित्तिकै आत्तिएर भन्नुभयो, 'कतिबेला टोकेको? किन अघि नै तिमर्ले ठुलामान्छे नबोला'को?'
'तेरिमा साले, तँ खुब डाक्टर हुने? पख्लास् तँलाई, यस्लाई केहि भयो भने पुलिस् बोला'र तँलाई झ्यालखाना नपठाई त....' ज्ञानेका ठुल्दाजुले मेरो गालामा एक झाप्पु कस्नुभयो र गँगालाई बोकेर दौडिनुभयो ।
गँगाको घरको आँगनमा झुरुम्म मान्छेहरु भेला भैसकेका थिए । गँगालाई आँगनमा लडाईएको थियो । भेला भएका मान्छेहरुले शरिरभरी सर्पको विष फैलिसकेको र प्राण पखेरु उडिसकेको ठहर गरिसकेका थिए । गँगाकि आमा 'मेरि रानी, मेरि पुतली जस्ति छोरी यो तिमीलाई के भयो? हे दैब.....' ईत्यादि भन्दै छाति पिट्दै, मजेत्रोले अनुहार पुछ्दै रुँदै थिइन् । म आँगनमा निस्कन डराएर करेसोमा भएको सिंवीको झालमा छलिएर अपराधिझैं सबै हेरिरहेको थिएँ ।
भेलाभएका मान्छेहरु केसु, ज्ञाने र अरु खेलका साथीहरुलाई के भयो कसरी भयो भनेर सोधिखोजी गर्दैथिए । उनिहरु पालैसँग यस्तो यस्तो भयो भन्दै परि लाउँदै मलाई दोषी देखाउँदैथिए । सिंवीको झालमा लुकेको म भने अब पुलिस आउनेछ र मलाई बाँधेर झ्यालखानमा थुन्न लानेछ भन्ने भयले सास दबाएर थाँक्रो हालेको कुनै रुखको लाथ्रोझैं खडा थिएँ । त्यसबखत मेरो आँखा र कान बाहेक शरिरका अरु सबै अँग निश्क्रिय बनेझैं भएको थियो । म अपराध गरेको र अब उम्कने बाटो पनि नरहेको स्थितीमा थिएँ त्यहाँ । आँखाले पनि पुलिस आएको र सिंवीको झालभित्रैबाट समातिएको दृश्य देख्न थालिसकेको थियो ।
गँगाको बाउको स्वर सुनेपछि मेरो शरिरमा रक्तसञ्चार हुनथालेझैं भएथ्यो मलाई । पुलिस लाएर पकडाउने रहेनछन् भन्ने कुराले ढुक्क भएर लामो सास फेरें मैले । एकाएक आँखाबाट तरर आँसु चुहिएर आए । भित्रैदेखि भक्कानो फुटेर आयो । म डाँको छाडेर रुन थालेँ भने मेरो उपस्थिती सबैले थाहा पाउनेछन् र मलाई गाली गर्नेछन् भन्ने भयले त्यहाँबाट धाईफल तोडेर घरतिर दगुरें म ।
घरपुगेर अघाउँजी रोएँ । धेरै दिनसम्म रोएँ । यदाकदा गाउँका ठुला मान्छेहरुले गँगाको मृत्युको दोष मलाई लगाउँदा झन् साह्रो रोएँ म । म ठुलो भैसकेपछि सायदै सबैले यो दुर्घटना बिर्सिए तर मैले गँगालाई सम्झिँदा अझैपनि रुन आउँछ मलाई । अझैपनि मैले गर्दा नै गँगा मरेकि हो भन्ने लागिरहन्छ ।
'साँच्ची त, हामी छ नि सानोमा चारवटा पत्ता भएको चरिअमिलो खोज्थ्यौ, लक्कि हुन्छ भनेर । हेर्नुस् त यो सबैमा तीन तीन पत्ता भएको मात्र हुन्छ । चारपत्ता हुँदैन है?' अघिदेखि निहुरिएर केहि अनुसन्धान नै गरेझैं गरिरहेकि शर्मिलाले तीनपत्ते चरिअमिलोको टुक्रा म तिर बढाउँदै आउँदा म झसँग भएँ ।
Chariamilo ko memory bidarak nai rahe6.
राम्रो कथा! तर मलाई त अब डर पो लाग्न थाल्यो  दीपकजीसंग दोस्ती गर्यो भने मरिने पो हो कि भनेर !! सबै केटी साथीलाई (पात्र )  किन मराउने होला ?!! दीपकजी अब आउने कथा निकै सवल र समाजमा सुनौलो परिपर्वतन गर्न सक्ने साहासिलि प्रगतिशील महिला पत्र राख्नुस है ! साच्चै कथा निकै चाख लाग्दो छ ! अहिले सम्म त गंगाले पुनर्जन्म लिसकेकि होलिन है :)